NOMERY 25.1-18 F. 5 | Fitandremana Ankadifotsy
NOMERY 25.1-18 F. 5
SAHY NANDRAY ANDRAIKITRA!
Voatarika fa tsy nahatarika. Indrisy! Firenena niavaka tamin’ny maro ny Zanak’Israely satria voafidin’ny Tompo ho Azy. Manana ny tena Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ary tsy manam-paharoa saingy voatariky ny Moabita hanompo sampy. Tsy misaraka ny fanompoan-tsampy sy ny fijangajangana. Fahavetavetana tena halan’ny Tompo ireo. Tafalatsaka tamin’izany anefa ny Israely ary nahatezitra mafy ny Tompo izany.
Inona no nasainy nataon’i Mosesy ? Toe-javatra tsy mahafinaritra mihitsy izany. Toy izao anefa no mitranga eto amin’ny fiaraha-monina Malagasy ankehitriny. Tsy mahataona ny olona hanolon-tena ho an’ny Tompo ny mpino fa voataona hanaraka ny ratsy miseho manodidina azy. Inona no antony? Tsy ampy ny fahatahorana sy fanajana ny Tompo, tsy lalim-paka ny finoana. Samia ary mandin-tena isika. Latsaka ve ianao, inona no antony?
Tsy tahotra, tsy henatra. Eo imason’ny vahoaka sy i Mosesy mitomany manoloana ny loza vokatry ny tsy fanarahana ny tenin’Andrimanitra, indro Zimry sy Kosby mifampitarika handeha hijangajanga. Mba azonao sary an-tsaina ve izao zavatra miseho izao? Tsy nandray lesona tamin’ny zava-niseho fa mbola hanampy ota ny ota ihany. Mampalahelo an! Maro ny olona mbola tsy mety tonga saina amin’ny ratsy ataony na dia efa misy kapoka asehon’ny Tompo aza.
Tsy nahazaka izao faharatsiana izao i Finehasa ka nandray andraikitra. Tsy mora ity fihetsaka nataony ity saingy nirehitra tamin’ny fiarovana ny voninahitry ny Tompo izy. Fampitsaharana ny fahadalana tamin’ny famonoana ireto olona tsy matahotra an’Andriamanitra ireto. Voavonjy ny firenena nohon’ny fandraisana andraikitra nataony. Firy ny Finehasa sahy mandray andraikitra eto amin’ny firenena? Nahazo fankasitrahana avy amin’ny Tompo izy (12,13).